Cusbitallada oo ay caqabad ku noqotay shuruudo wax laga bedeley - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cusbitallada oo ay caqabad ku noqotay shuruudo wax laga bedeley
La daabacay onsdag 8 juni 2016 kl 15.00
Madaxa shaqaalaha: Waxa dhici karta in qeybo la xiro
Sawirle: Anna Lindgren
Cusbitallada yar yar, sida cusbitalka Mora ee dhaca gobolka Dalarna ayay caqabad ku noqotay is-bedel lagu sameeyey shuruudaha luuqadda iswiidhishka ee howl-wadeennada caafimaadka dhakhaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha caafimaad oo la adkeeyey. Dhowr sannadood oo luuqadda iswiidhishka la barto ayay shuruudaysay hayadda hoggaanka bulshadu.
– Waa go’aan welwel leh, maadaama aannu sidii aannu howlaha u fulin lahayn aannu uga baahan-nahey shaqaale waddammo kale, sida uu sheegay Stefan Lindskog, ahna madaxa laanta shaqaalaha ee hayad-goboleedka caafimaadka ee gobolka Dalarna.
Shaqaalaha dar-yeelka caafimaad ee laga soo kaxeeysto waddammo kale ayey maanta ayay maanta luuqadda baraan howl-wadeenno u xil-saaran ee hayad-goboleedka caafimaadka, waana howlo si habsami leh u socda, sida ey sheegeen, Stefan Lindskog iyo Ingmarie Westling Gustavsson oo labaduba ka howl-gala hayad-goboleedka caafimaadka ee Dalarna.
Hase yeeshee ay hayadda hoggaanka bulshadu ay bishii abriil gaartay go’aan la xiriira sidii kor loogu qaadi lahaa heerka luuqadda ee dhakhaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha caafimaad. Iyo in wixii intaa ka dambeeya uu heerka aqoonta luuqadda iswiidhishku u dhiganto midda dugsiyada sare ee saddex sannadood ah. Waana tallaabo hor-seedi karta in shaqaale ka soo jeeda waddammo kale ey waddammo kale ka doortaan halkii ey ka iman lahaayeen Sweden iyo gobolka Dalarna.
– Iminka ayaannu dhibaato ku qabnaa, gaar ahaan cusbitaallada magaalooyinka Mura, Ludvika iyo Avesta. Halkaaasina oo iminkaba wax badan ey howl-wadeennadu ka yimaadaan dalka dibaddiisa, sida ay sheegtay IngMarie Westling Gustavsson.
Miyaan loo baahneyn in shaqaaluhu luqad ku filan ku hadlaan?
– Waa mid loo baahan yahay. In lagu niyad wayn yahay luuqad wanaag-san in lagu hadlo, hase yeeshee waxaa laga yaabaaa in dhabbada loo maraa dheeraato oo ay xiise yeelan waydo.
Mid ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee ka howl-gala Dalarna ayaa ah dhakhtarad Christine Ressel. Oo muddo iminka shan sannadood laga joogo ka soo guurtay magaalada Göttingen ee dalka Jarmalka, una soo guurtay magaalada Falun.
Muddo dhowr bilood ah ayay ku baratay luuqadda iswidhishka oo ey ka caawiyeen magacallimmiin ka howl-gasha hayad-goboleedka caafimaadka, iyadoona afartii sannadood ee ugu dambeeyeyna ku howl-galeeysay dhakhtar-nimo. Halka ay qudheedu ka welwel-san tahay in shuruudahan cusub ee luuqaddu hor-seeddo caqqabad la soo gudboonaada degmooyinka yar yar.
– Stockholm iyo Göteborg waxey yeelan karaan shuruudo adag ee luuqadaha, waayo dad badan ayaa halkaa raba, hase yeeshee Dalarna wey kaga adkaan doonta, sida ay sheegtay Christine Ressel.
Källa/ P4 Dalarna